Mwedzi mina naFocal Fossa. Ichi ndicho chiitiko changu kushandisa Ubuntu 4 | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | Kugoverwa, General, GNU/Linux, Zvimwe Linux
Mazuva mashoma mushure mekuburitsa vhezheni itsva, Ubuntu inotanga kuburitsa mifananidzo yeinotevera. Pakutanga ivo vanosiyana zvishoma kubva kune yazvino, asi vamwe vanonetseka havana basa nazvo uye tinoiisa zvakadaro nekuti tinoda kuona maitiro ayo. Ndanga ndichishandisa Ubuntu 20.04 Focal Fossa kubva kupera kwegore rapfuura sekuparadzirwa kukuru (izvo zvisingakurudzirwe kunze kwekunge uine imwe backup system) uye mhedzisiro yacho yanga yakanaka kwazvo.
Ndokumbira utarise kuti izvi ndizvo tsananguro yehupenyu hwangu uye kwete kuverengerwa kwehunhu.
Dai hama yangu Jorge Luis Borges akararama uye achiziva Linux, ainyatso tsanangura iyi itsva vhezheni yeUbuntu nekugadzirisa mutsara kubva kune imwe yenhetembo dzake; "Ubuntu yakawana gnomican destiny yayo." Ini handisi chaizvo fan weiyi desktop, asi ndinobvuma kusangana kwakapatsanurwa kwakatarisana neCanonical payakasarudza kusiya Kubatana, yaive sarudzo yakanaka kwazvo.
Mwedzi mina naFocal Fossa. Maonero angu
Shanduko yekutanga inoonekwa panguva yekumisikidza midhiya kutanga. Chidzitiro chinoratidza chechokwadi cheki yemafaira auchazoyambira kana anga asina kunyorwa nemazvo. Zvisinei, kuchaja kunokurumidza chaizvo.
Maitiro ekumisikidza haana kusiyana zvakanyanya. Tinogona kusarudza kuiswa kushoma kana kuzere. Uye kana tikasarudza iyo, madhiraivha eimba anowanikwa anoiswa.
Iko kune zvakadzama neanosimudza. Kunze kweLubuntu iyo inoshandisa Calamares (yakafanana naManjaro kana KDE Neon) mamwe ese eUbuntu shanduro anouya neyakajairika Ubiquity. Zvirinani kwandiri, zvinotora Ubiquity yayo yakanaka maminetsi matatu kuenda kubva kune yekumisikidza mhando yekusarudza skrini kune iyo partition mhando. Makore ese aya ini ndaifunga kuti kumisikidzwa kwaizomira uye kuti waifanira kukwira nekudzikisa madhiraivha kakawanda kuti ashande. Ini ndakatozivisa bug. Zvisinei, muCalamares kunonoka uku hakuitike.
Asi, mukufarira Ubiquity iyo inofanirwa kuzivikanwa kuti yayo yekuparadzanisa mupepeti iri nani zvikuru.
Paunotanga kutanga iyo inoshanda system, unotarisana nayo iyo yakagadziriswazve yekukiya skrini. Kana dhesiki richivhura, iwe uchaona gomba rakakutarisa iwe askance. Iyo yakasarudzika yekugamuchira app inoratidzwa pazasi. Rangarira kuti sezvo iri yakawedzera rutsigiro vhezheni unogona kumisa LivePatch, iyo yekuchengetedza yekumisikidza yekuisa sevhisi iyo isingade reboot.
Makore apfuura ini ndakasiya kunzwisisa ndeipi nzira iyo hunhu hwega yega vhezheni yeUbuntu inosarudzwa. Imwe yemafungidziro angu inosanganisira Mark Shuttleworth uye yakachipa pamabhodhoro e whiskey eDia%. Ini ndinofanira kubvuma zvakadaro kuti sarudzo iyo Ubuntu Software Center yakaiswa muSnap fomati nepo karatorator ikadzoreredzwa sepakeji yakajairika, zvakabuda zviri nani pane zvaitarisirwa.
Calculator yakatora nguva yakareba kuti itange, nepo iyo GNOME Software Center yakanga ichishamisa zvisingaite. Injini yayo yekutsvaga haina kana kumboshanda, yakaratidza zvakapetwa zvekushandisa kana kuti haina kuwana zvayaitsvaga. Zvese zvakachinja zvachose.
Kupesana nezvakatya vazhinji vedu, Chitoro chekushandisa chinotanga ipapo, mushure memasekondi mashoma katalog yekushandisa yakatakurwa (mune izvo zvinyorwa zveapakeji ayo anoratidzwa nekutadza) uye injini yekutsvaga inowana.
Ivo vanogona kuzvigadzirisa, asi shanduko iyi inoita kuti zvisakwanise kushandisa Software Center kuona nekuisa mapakeji muFlatpak fomati.
Kana iri yekugadzirisa kutaridzika kwedesktop, zvichiri kusanzwisisika kuti iyo GNOME tweak chishandiso haina kuverengerwa pakati pezvakagara zvaiswa. Zvisinei, mune yekumisikidza chishandiso isu ikozvino tave nemukana wekusarudza echinyakare maitiro, akareruka kana akasviba maitiro kubva kune anodzora pani. Kana iwe uri kutsvaga yechokwadi yeGNOME chiitiko iwe unogona kushandisa iyo application Extensions kuita kuti yekuparura parutivi inyangarike.
Pane zvimwe zvinongedzo zvekugadzirisa mune yepasirese nyaya. Sezvandambotaura kare, Nokusingaperi, iyo shanduro dzemapurogiramu dzinoratidzwa mune snap fomati. Asi, rondedzero yacho haiwanzo kuve muchiSpanish. Kune rimwe divi, otomatiki bug mitsara izvozvi zvaitwa mumutauro wekumisikidza. Izvi zvinoita kuti zviome kune vanogadzira ongororo.
Imwe nyaya yaunofanirwa kuchengeta mupfungwa ndeyekuti haichapiwi Python 2 kutsigira. Mamwe maapplication aunomisikidza nemaoko anogona kunge asisashande. Kana iwe ungatofanira kutsiva mune yekutanga rairo python kubudikidza python3.
Ini pachangu, handidi GNOME uye kubva pa23 ndichachinjira kuUbuntu Budgie, asi ndinofanira kubvuma izvozvo Ubuntu 20.04 Focal Fossa ndiyo yakanakisa Kuburitswa Ubuntu mumakore akati wandei. Kana iwe wakasiya iyo nguva refu yapfuura, inguva yakanaka yekudzoka.
Ubuntu 20.04 Focal Fossa ichave iripo kubva Kubvumbi 23 pa peji rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mwedzi mina naFocal Fossa. Ichi ndicho chiitiko changu kushandisa Ubuntu 4
john john akadaro
Ah, ndanga ndatonzwisisa kuti sei wanga uine shanduro yemwedzi mina ichangobuda kuruzhinji nhasi. Iwe uri "muedzo" (akajairika muedzo mushandisi). Nerondedzero yako, ini ndinosimbisa zuva rega rega chikonzero chekusiiwa kwangu uye zvandinoda zveMenta neSuse.
Pindura Juan Juan
Zvakadii nezvekushandisa zviwanikwa?
Zvirinani kwazvo kupfuura mushanduro dzakapfuura
Zvakanaka, ini ndakaisa manjaro uye ini handisi kuzodzokera kune chero Ubuntu kana chero chimwe chinhu. Aya ndiwo maitiro ese maDistros. Iwe unoisa kamwe uye unomhanya, iwe unokanganwa, inoenda super fluid, yakanaka kwazvo uye yakanakisa ye newbies uye yayo yekuvandudza system yekusatevera imwechete arch kutenderera inoita senge kwandiri, hazvidi kuti uve zvakadaro kusvika pari zvino, kuitira kuti zvese kutyora chero nguva, vanoiongorora voiburitsa pasina zvikanganiso. Nechero Ubuntu, ini ndaigara ndine matambudziko ekuvandudza kubva kune imwe vhezheni kuenda kune imwe uye ndaifanira kudzoreredza kubva pakutanga, zvakare, kurwadziwa kwandinovenga zvakanyanya Nhasi vanofanirwa kunge vachiumburuka uye panofanirwa kuve nemhando mbiri dzekuumburuka, mhando yeArch pamucheto wechisvo, yakakwira kusvika parizvino uye inonaka mhando, kusvika parizvino, asi kwete zvakanyanya uye ichiona. Kusvikira nhasi uno Ubuntu, paine vakatosara, handiwaone zvachose pazvinodiwa, kunze kwekunge vaitwa kutenderera, novice ane manjaro zvakanyanya uye haafanire kunetseka nezve ichi kana icho vhezheni, gadza kamwe chete uye ndizvozvo, izvo zvakanaka kune newbie.
Pindura kuna Unixmen
ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu blablabla ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu ubuntu blablabla
Mhoro. Sezvo iwe uchinetseka kupindura, unogona kuenda padanho rekupedzisira uye nyora chimwe chinhu chinonzwisisika kutibatsira kuvandudza. Ndatenda.
Izvo zvese zvinoenderana nepfungwa yekuona uye zvido zveumwe neumwe, ini ndaisatomboita jee kuseka muchina unotenderera pane timu yekugadzira, kunyangwe zvishoma pane server, kune rimwe divi ini handidi yazvino vhezheni yepakeji imwe neimwe, Ini ndinongoda kuti zviite kuti zvishande uye kana Kana zvirizvo, ndiwo mapfumo kana kurodha inoenderana package.
Zvino kana zvasvika pakudzoreredza sisitimu, tichifunga kuti lts rutsigiro makore mashanu zvinoita kunge zvisina kunetsa, kunyanya uchifunga kuti iwe unogona kupatsanura / kumba kungoisa system pasina kurasikirwa nemafaira.
Ini ndanga ndakamirira iyo kwenguva yakareba, kunyangwe chokwadi chekusimudzira iyo Snap package inondinetsa. Muchokwadi chitoro cheUbuntu ndicho chitoro cheSpap, ndinonzwisisa.
Iyo Snap inotora nguva yakareba kuti itange kumusoro, seyakajairika mutemo (kwete ese) pane yangu pc. Zvichava kuti handina i7.
Ini ndaitarisirawo iyo yazvino vhezheni yeGnome, 3.36. Izvo zvinovandudza mashandiro zvishoma.
Sezvandinotaura, ini ndanga ndakamumirira iye kune izvo zvese, uye pakarepo, Manjaro. Handifungi kuti ndichadzoka zvakare. Chitoro chekushandisa ndicho chakanakisa chandakaona pane zvese, ini ndinowana zvese nekuda kweAUR repositori ndisina ruzivo rwakawandisa rweLinux world (iyo ini ndisina) uye zvese zvandaitarisira mune yekupedzisira kubva kuBuntu. Ndave mwedzi, ini ndisina kuisa damn Snap uye zvese zvinofamba mushe.
Ndinogadzirisa kwauri. Chitoro cheapp chinenge chiri GNOME Software Center. Musiyano ndewekuti yakaiswa seSpap package
Ndatenda nekugadziriswa. Ini ndichave ndaverenga zvimwechetezvo mune imwe ongororo uye ini ndakanzwisisa kuti yaive Snap Store. Kunyangwe izvozvi ini ndichirangarira kuti ivo vaitove neiyo skrini yeiyo Snap Chitoro pane peji. Hazviwanzo.
Ini ndakaiyedzawo asi pandakangomutsa iyo yerima nzira ndakaona kuti iyo gedit inoratidzira mutsetse wazvino wechitupa mune zvisingaiti kuverenga mutsauko. Ini ndakazivisa ubuntu-dev asi hapana mhinduro. Ndinovimba unogona kuzvigadzirisa. Ini ndinoda nzira yerima asi gnome yakagara ichikuvadza kwandiri. Plasma yeiyo rima divi kune kukwana! ;-)
Pindura kune caerbp
Ignatius Cerda akadaro
Ini ndinonzwa kuti iro desktop rave nenguva refu rakarega kuve rakakosha kukambani, rinotarisa pane server vhezheni (zvinoita kunge ndizvo zvinoita mari).
Nezuro ndakaedza kushandisa Ubuntu 18.04.4 uye ini ndakawana iyo nhau yekuti "ratidza desktop" bhatani haisisipo. Izvi zvakandimanikidza kuisa zvigadziriso zvegnome kuitira kuti ndive nechishandiso ichi, icho chandinoona chakakosha. Nenzira imwecheteyo ini ndaifanira kuisa waini kuburikidza neiyo terminal nekuti iyo vhezheni iri muchitoro yapera nguva.
Ndiri kurevei neizvi zvese? Ubuntu ihwohwo kubvira kare hwakaguma kuve iko kugovera kwakaringana kwevatsva kuWindows. Vazhinji vashandisi vanoda anoshanda system "kunze kwebhokisi" inoshanda kunze kwebhokisi, chinhu chepedyo kune windows. Iri munzvimbo ino umo Zorin os uye Linux Mint vanobudirira.
Ini ndinoomerera, vanhu vazhinji havasi ma geeks, ivo vanongoda iri nyore-kushandisa-inoshanda sisitimu.
Pindura kuna Ignacio Cerda
Ini ndinoda focal fossa, kurira kwacho hakusi kufamba zvakanaka, asi ichi chakaipa mukati mehunhu, kunyangwe uine 12megas yeRam dzimwe nguva inononoka, asi ndakaedza kuzvigadzirisa nekuisa Plasma, ho, njodzi,
Mumwe munhu anogona kundiudza maitiro ekubvisa iyo?
Wakaedza Sudo alsamixer?
Ini ndinobvuma kuti ndiyo yakanakisa vhezheni yeUbuntu, uye kwandiri kuti ini ndamboedza akati wandei, ndinofunga ndiyo yakanakisa linux distro iripo, asi ... Iko kunogara kune asi. Iyo haina emule mune ayo ekuchengetedza !!
Emule aive nenhanho inopfuura muchitoro cheSpap asi akanyangarika nehusiku.
Amule haina kuvandudzwa kubvira 2016
Ini ndoziva, ndosaka ndakaisa ubuntu 18.04 iyo ine emule uye ndokusimudzirwa ku ubuntu 20.04. Kunyangwe ndaizoda kuiswa kwakachena, ndizvo zvazviri.
Ndakachinjira kuFocal Fossa kubva kuGentoo sezvo ndakatenga laptop itsva uye yanga ichindipa matambudziko nezvinhu zvakaita sekurira. Ubuntu ndiyo yega distro yaiziva zvese pasina matambudziko uye ndinofunga ndichagara pano, kwekanguva. Chero zvazvingaitika, ndakatumidza Kubuntu nekuda kwerudo rwePlasma.
Ini ndaishandisa Ubuntu pakati pa2013 na2014, ndobva ndadzokera kuWin 7 kumashure uko. Mwedzi mishoma yapfuura ndakadzoka ku linux nyika neUbuntu zvakare (20.04 LTS). Ndakazviwana zvakanaka. Izvo zvakandiyeuchidza nezve kutsetseka kwayo kwekutsakatika kweLinux Mint KDE iyo yandaida kwazvo. Ndiri kuyedza nemuchina chaiwo imwe distro yakafanana neLinux Mint KDE (KDE Neon uye Kubuntu, ndinoda iyo DDE desktop) uye ndinoramba ndakanamatira neUbuntu. Iyo yakasimba kwazvo, iri nani kwazvo kupfuura makore apfuura. Ndiri kushamisika. Iyo ichave iri yangu yepakati OS kutama zvachose kubva kuWin 10.
Parizvino ndiri kufara uye kugadzikana mune iyi vhezheni, ndakanga ndisina kushandisa Ubuntu kwemakore mashoma. Kunyangwe ini ndisina pc ine simba kana yazvino (iri chishandiso chequadcore ine 4gb ddr2), inoshanda mushe, yakasimba uye inokurumidza Ini ndakanyatso gadza 20.04.2 negnome uye ndinogona kutaura kuti ndiyo yakanyanya kunaka (kufananidza yapfuura ubuntu) yandakashandisa kubvira 10.04 yandaida zvakanyanya. Kwaziso.
KwinFT, itsva KWin-based windows maneja weWayland
LibreOffice 6.4.3 inosvika yakazara zvigadziriswe zvebug